DEG DEG: Laba qof oo caawa lagu dilay Muqdisho’ | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA DEG DEG: Laba qof oo caawa lagu dilay Muqdisho’
DEG DEG: Laba qof oo caawa lagu dilay Muqdisho’
Rag hubeysan ayaa caawa degmada Yaaqshiid ee Gobolka Banaadir gaar ahaan xaafada Towfiiq waxa ay ku dileen Askari iyo qof shacab ah, sida ay inoo xaqiijiyeen Hay’adaha ammaanka Dowladda Federaalka.
Koox ku hubeysneyd Bastoolado ayaa beegsaday Askari ka tirsanaa Ciidanka Dowladda Federaalka oo ku sugnaa Bar Kontorool oo ku dhow Hotelka Towfiiq ee degmada Yaaqshiid, waxayna ka toogteen Askariga qeybta sare ee jirkiisa.
Dadka degaanka ayaa sheegay in sidoo kale Dableyda hubeysan ay dileen qof shacab ah oo goobta ka akdhawaa, kadib goobta ayay ka baxsadeen raggii dilka geystay.
“Wallaalow niman Bastoolado ku hubeysan ayaa caawa fiidkii agagaarka Hotelka Towfiiq waxa ay ku dileen Askari iyo qof shacab ah, Askariga markii la dilayay waxa uu ku mashquulsanaa baaritsa Gaadiidka wadada isticmaaleysay, marqura ayaa rasaas lala dhacay, kadib raggii way baxsadeen.” Waxaa sidaas yiri qof ka mid ah dadka degaanka.
Durba goobta uu dilka ka dhacay waxaa gaaray Maamulka degmada iyo Ciidamada ammaanka, waxaana la sheegay in gacanta lagu dhigay tiro dhalinyaro ah oo saarnaa Gaari nuuca raaxada ah, kaasi oo ka mid ahaa gaadiidka ku jiray safka Baabuurta ah ee la baarayay.
Raggan la qabtay ayaa waxaa loola dhaqaaqay xarumaha baarista, waxaana looga shakiyay in ay wax ka ogyihiin dilka dhacay. balse baaritaano dheeraad ah ayay Hay’adaha ammaanku sheegeen in lagu sameyn doono.
Waxaa muuqata in ay kordheen dilalka qorsheysan ee ay geysanayaan ragga hubeysan, Saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ayay Muqdisho ka dhaceen dilal, xalay xaafada Macalin Nuur ee degmada Dharkeynley ayaa lagu dilay Sarkaal ka tirsanaa Millitariga oo lagu magacaabi jiray Yuusuf, sidoo kale Sabtidii xaafada Taleex ee degmada Hodan waxaa lagu dilay Nabadoon.